Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်)
Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ ဖြစ်တဲ့အကြိမ်ေ၇က်ိုလျော့နည်းနိုင်စေဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ တစ်ခါတည်းနဲ့ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ေ၇ာဂါကို မကုသနိုင်ပါဘူး။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ေ၇ာဂါရနေတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ကုသသင့်ပါတယ်။ ( အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသုံးခြင်း၊ အမှောင်ခန်းထဲမှာလဲလျောင်းခြင်းကဲ့သို့သော)
Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
အစာနဲ့တွဲပြီးသို့ အစာမပါဘဲသောက်နိုင်ပါတယ်။် ဆေးသောက်နေရစဉ်မှာ အရည်တွေအများကြိးသောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒိလိုပြုလုပ်ခ်ြင်းဖြင့် ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနုိင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ တစ်ခုလုံးကိုမျိုချရမှာစြဖ်ပါတယ်။ ချေကျိတ်ခြင်း၊ ၀ါးစားခြင်းမပြုသင့်ပါဘူး။ အရသာခါးပါတယ်။ ရုတ်တရက်ဆေးမရပ်လိုက်ပါနဲ့။ ရုတ်တရက်ရပ်လိုက်ခြင်းက အတက်ေ၇ာဂါကိုပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ရပ်ဖို့လိုတဲ့အခါမှာ တဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့လျှော့ပေးသင့်ပါတယ်။
Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Topiramate သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဒီဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိူးတွေ တွေ့ရမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအထက်ပိုင်းလက္ခဏာများ ( ချောင်းဆိုးခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ နှာရည်ယ်ိုခြင်း၊ နှာချေခြင်း)
အောက်ပါပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို တွေ့ရမယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းဂရုပြုသင့်ပါတယ်။
ပြင်းထန်တဲ့ဓာတ်မတည့်မှုများ ( အဖုအပိမ့်ထခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ ယားခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်တင်းကျပ်ခြင်း၊ ပါးစပ်မျက်နှာနှုတ်ခမ်းလျှာေ၇ာင်ခြင်း၊
ဖျားခြင်း၊ချမ်းတုန်ခြင်း၊ နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်း လည်ချောင်းနာခြင်း
ခံစားချက်များဆိုးရွားခြင်း ( စိုးရိမ်ခြင်း၊ စိတ်ကျခြင်း၊ ကနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ခြင်း၊ ထိန်းမရအောင်လန့်ခြင်း၊ အမူအကျငိ့များပြောင်းလဲခြင်း)
သတ်သေလို့သည့်အတွေးများပေါ်ခြင်း သို့ ကြိုးပမ်းခြင်း
ကော်ဖီစေ့ေ၇ာင်သွေးများအန်ခြင်း၊ သွေးချောင်းဆိုးခြင်း၊ သွေးဆီးသွားခြင်း၊ အနက်ရောင်အနီရောင်ကတ္တရာစေးရောင်ဝမ်းသွားခြင်း၊ သွားဖုံးသွေးယိုခ်ြင်း၊ အကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိဘဲ ပေါက်ပြဲခြင်း၊ ပေါက်ပြဲနာများပိုကြီးလာခြင်း၊ ပြင်းထန်တဲ့သွေးထွက်ခြင်း သို့သွေးမတိက်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Valproic Acidပါဝင်တဲ့ အတက်ရောဂါဆန့်ကျင်ဆေးပေါင်းစု
ပထမပတ်နှင့်ဒုတိယအပတ် – 25 mg နေ့စဉ်
တတိယပတ်နှင့်စတုတ္ထပတ် – 25 mg နေ့စဉ်
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ပမာဏ – 100 to 400 mg/day ( တစ်ကြိမ် သို့ နှစ်ကြိမ်ခွဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။) ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ဆိုရင် 25 to 50 mg/day တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ Valproic Acidနဲ့တွဲပေးမယ်ဆိုရင် ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ပမာဏ-
Lamotrigineအသုံးပြုကုသခြင်းက လတ်တလောအသုံးပြုထားတဲ့ဆေးတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်၂နှစ်မှ၁၂နှစ်အထိ- ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပေးနိုင်သောပုံစံ ( ဆေးပြားတစ်ပြားလုံးကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ) ၂နှစ်မှ၆နှစ်အထိ ရောဂါထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ပမာဏကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးပေးပြိီးရပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
30 kgထက်ကိုယ်အလေးချိန်နည်းတဲ့လူတွေမှာ 30 kgအထက်ကိုယ်အလေးချိန်ရှိတဲ့လူတွေထက် 50%တိုးပေးဖို့လိုပါတယ်။
Topiramate (တော့ပိုင်ရာမ်ိတ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးပြား၊ သောက်ဆေး 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg.